HTC U 11 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုအပြည့်အ ၀ စစ်ထုတ်သည် Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC U11 ကိုတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမှနှစ်ပတ်ကွာဝေးသေးသည်၊ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC flagship အသစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုလက်တွေ့ကျကျသိထားပြီးဖြစ်သည် ကိရိယာ၏အရောင်းသေတ္တာများထဲမှတစ်ခုယိုစိမ့်ခြင်း အသစ်အပါအဝင်အသေးစိတ်အားလုံးကိုကြည့်နိုင်တဲ့နေရာ ဇာတ်ကောင် ကြောင်းမိုဘိုင်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြောင်းအခြေခံစံနှုန်းမှတဆင့်ထုတ်ဖော်မခံခဲ့ရပါ။
Samsung သည် Snapdragon 835 ကိုအများဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးကတည်းက Galaxy S8 နှင့် S8 PlusU 11 တွင်တူညီသောပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားသော်လည်း HTC သည်၎င်း၏ flagship တင်ဆက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုံရိပ်ကိုလည်းမော်ဒယ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖော်ပြသည် 128GB Internal Storage နှင့် 6GB RAM ပါ ၀ င်သော SIM ကဒ်နှစ်ခုအသုံးပြုနိုင်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က GeekBench မှတဆင့်ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် 4GB မော်ဒယ်လ်ထို့ကြောင့် HTC U 11 တွင် 64GB သိုလှောင်မှုနေရာနှင့် 4GB RAM ပါ ၀ င်သောဗားရှင်းရှိလိမ့်မည်။
HTC U 11 အကွက်၏အချက်အလက်များ
အခြားအရာများအပြင် HTC U 11 တွင်aGorilla Glass 5.5 ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့် ၅.၅ လက်မ QHD မျက်နှာပြင်အဖြစ်f/ 12 aperture ပါ ၀ င်သော 1.7 megapixel အနောက်ကင်မရာOptical image stabilization နှင့် UltraSpeed ​​AF နှင့် Ultrapixel3နည်းပညာများစိတ်ဝင်စားသည်။ ရှေ့ဘက်တွင်တော့ selfie အတွက် 16 megapixel ကင်မရာ.
HTC U 11 ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ ခုခံလက်မှတ် IP57၎င်းသည် IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လောက်မများသော်လည်းအနည်းဆုံး၎င်းသည် ၁၅ စင်တီမီတာမှ ၁ မီတာအနက်အတွင်းနှစ်မြှုပ်ခြင်းမှကာကွယ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, နားကြပ်ပေါက်တစ်ခု၏တည်ရှိမှုအကြောင်းကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ, ဒါကြောင့် HTC က Motorola ကိုသွားပြီးဒီ port ကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင် HTC U 11 လည်းပါ ၀ င်လာမည် NFC ဆက်သွယ်မှု၊ Wi-Fi AC၊ HTC BoomSound အသံနည်းပညာ, တက်ကြွသောဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတူ Usonic နားကြပ်, လက်ဗွေစကင်နာများနှင့်တစ် ဦး လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းဖြင့် 3000mAh ဘက်ထရီ.
ဟုတ်ပါတယ်၊ HTC U 11 ၏အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်ကတော့၎င်း၏ထိတွေ့နိုင်သောအနားများဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ terminal ပေါ်ရှိအမူအရာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အကျဉ်း, HTC U 11 တွင်ပါဝင်မည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များ:
Qualcomm Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာ
6GB RAM + 128GB Internal Storage သို့မဟုတ် 4GB RAM + 64GB သိုလှောင်မှုအတွက်
2TB အထိ microSD ကဒ်များကိုထောက်ပံ့သည်
Gorilla Glass 5.5 ကာကွယ်မှုနှင့် Edge Sense နည်းပညာဖြင့် ၅.၅ လက်မ LCD မျက်နှာပြင်
F / 12 aperture နှင့် UltraSpeed ​​autofocus + Optical image stabilization ဖြင့်နောက်ကင်မရာ 1.7 megapixel ရှိသည်။
16 megapixel ရှေ့ကင်မရာ F / 2.0 နှင့်အတူ
HTC Usonic၊ 3D အသံသွင်းခြင်းနှင့် HTC BoomSound ဖြင့်အသံတိုးမြှင့်ခြင်း
Qualcomm မှလျင်မြန်စွာတာဝန်ခံ 3.0
dual SIM (nano) ပံ့ပိုးမှု
HTC U 11 ကိုတရားဝင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုမေလ ၁၆ ရက်တွင်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်တရားဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ဤအပိုင်းကိုပြန်လည်သွားရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC U 11 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုလုံးလုံးလျားလျားစစ်ထုတ်သည်
Audbos DB-01၊ ယူရို ၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသောအရည်အသွေးမြင့်နားကြပ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
WhatsApp beta အသစ်သည်အဓိက ၀ င်းဒိုး၏ထိပ်သို့ chats ၃ ခုကို pin လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်